Nin helay qado Bilaash Muddo Sanad Ah Iyo Qaabkii uu Isticmaalay Oo dad badan Ka yaabiyey | Xaqiiqonews
Nin helay qado Bilaash Muddo Sanad Ah Iyo Qaabkii uu Isticmaalay Oo dad badan Ka yaabiyey
Nin ka soo jeeda dalka shiinaha gaar ahaan Gobolka Kwong Wah Yit Bo’ ayaa isticmaalay xeelada cajiib ah ka dib markii si bilaash uu ku helaayey Qado heersare ah muddo sanad ah.
Ninkan ayaa ka iibsaday Visa-ha heerka koowaad mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada shiinaha oo lagu magacaabo”China Eastern Airlines” waxaa ninkani uu maalin kasta cuni jiray Qado VIP ah oo ku dalacan Shirakadda duulimaadka”China Eastern Airlines”.
Si uu u helo qadada VIP_da ah waxaa uu maalin kasta markii uu qadeeyo dib u dhigi jiray safarkiisa si uu u helo qadada maalin kale arintaasi oo socotay muddo sanad ah ilaa ugu danbeyn uu fashilmay.
Saraakiisha Shirkadda “China Eastern Airlines” ayaa baaritaan ku sameeyey sababta ninkani uu maalin kaste u baajiyo safarka waxa ayna ugu danbeyn ogaadeen arintani ku saabsan qadada bilaashta ah iyagoona kansalay VISI-hiisa waxeyna u celiyeen lacagtiisa.
Wargeys lagu magacaabo NEWS oo Australian ah ayaa qoray”Ninkani waxaa uu arintani sameeyey in ka badan 300 oo mar ka dib markii uu Calool keenay qadada macan darteed ayey sirtu ogaatay Shirkadda “China Eastern Airlines”.